admin – List Khabar
27 mins ago रोचक 0
काठमाडौं । प्याजको सेवन गर्न तपाई कति रुचाउनु हुन्छ ? वा सेवनमा धेरै भएको त छैन् ? वा त्यसको बास्ना मन पर्दैन ? वा सेवन गर्न उचित मान्नु हुन्न ? तर प्याजका धेरै उपयुक्तता मध्य एक हो यौ/न क्षेत्रमा बृद्धि । प्याजले केवल खानालाई मात्र स्वादयुक्त बनाउँदैन प्याजको भोजन अपच …
2 hours ago मनोरंजन 0
मुन्नी यानिकी हर्षाली मल्होत्राले ७ बर्षको उमेरमा नै बलिउडमा डेब्यू गरेकी थिइन् । हर्षालीले सन् २०१५ मा रिलिज भएको चलचित्र ‘बजरंगी भाइजान’बाट निकै चर्चा कमाउन सफल भइन् । उनी, ८ हजार बच्चाको बिचबाट यो चलचित्रका लागि छानिएकी थिइन् । त्यतिबेला उनी मात्र ७ बर्षकी थिइन् । हिन्दी चलचित्र क्षेत्रकी प्रसिद्ध …
4 hours ago Uncategorized, समाचार 0
टु’हु’रो पारेर एउटै चि’तामा जानुभो भन्दै छोरा यस्तो अवस्थामा भयो यस्तो, भिडियो सहित, झापाको दमकमा ट्रकले मोटरसाइकल लाई ठ’क्क’र दिं’दा श्रीमान श्रीमतीको घ’ट’ना स्थ’लमै मृ’त्यु भएको स”माचार अहिले सामाजिक संजालमा भा’इरल छ । इलाका प्र’हरी कार्यलय दमकका प्रह’री ना’यब उपरिक्षक नवराज कार्कीका अनुसार सुरुंगाको होटल का सञ्चालक ४३ वर्षीय पूर्णबहादुर …
4 hours ago समाचार 0
जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका–२ खैजनपुरगाउँमा सङ्क्रमणबाट एकै परिवारको तीन जनाको मृत्यु भएको छ । वडाध्यक्ष घमानसिंह खत्रीका अनुसार सङ्क्रमणबाट पन्ध्र दिनअघि ४३ वर्षीय रमण पोखरेल, सात दिनअघि ३८ वर्षीय हेमराज पोखेरल र शुक्रबार राति ३६ वर्षीय देवी पोखरेलको मृत्यु भएको हो । सङ्क्रमण तीव्र बनेपछि शनिबार रातिदेखि गाउँ सिल गरिएको छ …
5 hours ago Uncategorized, समाचार 0
महोत्तरी । सघन वर्षापछि केही दिनयता चर्को घाम लाग्ने र छिनछिनमा पानी पर्ने क्रमसँगै महोत्तरी जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा सर्पको बिगबिगी निकै बढेको छ । बर्खाकालमा पानीले दुला भरिएपछि बाहिर निस्केका सर्पको अहिले बिगबिगी बढेको हो । बर्दिवास–३ गौरीडाँडास्थित सर्पदंश उपचार केन्द्रमा अहिले सर्पदंशको उपचार लिन आउने दिनदिनै बढेका छन् । …
5 hours ago समाचार 0
सुन्दर जे सुकै देखे पनि खुशी रहने मानव जतिको स्वभाबनै हो। अझ आफ्नो प्रेमिका-श्रीमती सुन्दर परोस् भन्ने सम्पूर्ण पुरुष जतिको चाहना हुने गर्छ। ज्योतिषशास्त्र अनुसार विभिन्न राशिका छुट्टै विशेषता हुने गर्दछन् भने आनी-बानि देखि लिएर धेरै कुराहरु राशिले निर्धारण गर्ने हुन्छ। पुरुषलाई भुतुकै बनाउने सुन्दरता साथै गुनले भरिपुर्ण रहने ३ …
युवराजलाई दु’र्ववहा’र गर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई का’रबाही होस : नायिका पुजना प्रधान
नायिका पुजना प्रधानले पूर्व युवराज पारस शाहको हा’त स’माउने र दु’र्वव’हा’र गर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई का’रबाहीको माग गरेकी छन । सामाजिक सञ्चाल फेसबुक पेजमा प्र’तिक्रिया ज’नाउँदै उनले यसो लेखेकी हुन । उनले लेखेकी छन्, ’ति’म्रा लागि पूर्वयुवराज होलान हाम्रा लागी त अहिले पनि युवराज नै हुन र भोलीको राजा । हुन …
6 hours ago समाचार 0
जुन दिन सेन्ट जेभियर्स कलेजबाट पत्रकारिताबाट स्नातक तह उत्र्तीण गरेँ, त्यसैदिन मैले निर्णय गरेँ, निजामती सेवालाई आफ्नो ‘करिअर’ का रूपमा अँगाल्नेछु । सानैदेखि मलाई समसामयिक विषयवस्तुमा रुची थियो, त्यही कारणले गर्दा नै होला मलाई लोकसेवाप्रति तृष्णा जाग्यो । यही तृष्णाले मलाई लगनशील बनायो  । तयारीका सम्पूर्ण चरणमा पढाइलेखाइमा मलाई कहिल्यै बोझको आभास …
बलात्कृत ११ वर्षीया बालिकाले साढे ६ महिनामै जन्माइन् छोरा
काठमाडौं । बाबुको भन्दा बढी उमेरको छिमेकीबाट बलात्कृत ११ वर्षीया अन्जु ९नाम परिवर्तन०ले बुधबार बिहान विराटनगरको कोसी अञ्चल अस्पतालमा बच्चा जन्माएकी छन् । झापा खुदुनाबारी–१ टप्पु गाउँकी अन्जुले बलात्कारको २८ हप्तापछि सामान्य अवस्थामा छोरा जन्माएकी हुन् । साढे ६ महिनामै जन्मिएको बच्चाको तौल एक किलो दुई सय ग्राम रहेको छ …